XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga! – Gool FM
XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga!
Raage November 2, 2016
(Roma) 02 Okt 2016 – Waxaa todobaadkii tegey la ciyaaray kulamadii 11-aad ee horyaalka Talyaaniga, kaasoo kulankii ugu adkaa ay Juve 2-1 iskaga reebtay kooxda Napoli taasoo u saamaxdey inay hoggaanka ku qabato 4 dhibcood.
Haddaba, Dave Taylor ayaa sameeyay xulka todobaadkan ugu wanaagsanaa horyaalka Talyaaniga isagoo soo qaatay 11-kii laacib ee bandhigyada wanaagsan ka sameeyay garoomada kala gedisan ee Talyaaniga ee hoos ka eeg.
Matias Silvestre [Sampdoria]
Giuseppe Bellusci [Empoli]
Felipe Anderson [Lazio]
Jasmin Kurtic [Atalanta]
Daniele Dessena [Cagliari]
Marcello Trotta [Crotone]
XIDDIGAHA XUSKA MUDAN: Gianluigi Donnarumma [Milan], Nikola Kalinic [Fiorentina], Fabio Quagliarella [Sampdoria], Milan Skriniar [Sampdoria], Samir Handanovic [Inter], Adem Ljajic [Torino], Marco Benassi [Torino].
Gundogan iyo De Bruyne oo ka hadlay guushii caaqibada lahayd ay xalay ka gaareen Barcelona
Daawo Xayaysiinta cusub ee Adidas: Suarez oo Kontoroolaya Kubbad ka soo dhacday meel 35m ka sarreysa Dhulka